Warkii.com-News and information about Somalia War ka cusub ciidamada Mareykanka ee ka howlgali doona Somalia - Warkii.com-News and information about Somalia
War ka cusub ciidamada Mareykanka ee ka howlgali doona Somalia
Dowlada Ugandha ayaa shaaca ka qaaday inay soo dhaweyneyso Saraakiisha iyo Ciidamada Mareykanka ee laga howlgalin doono Somalia, gaar ahaan magaaada Muqdisho ee caasimada Somalia.
Dowlada Ugandha waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in la arko ciidamo kasoo jeeda dalka Mareykanka oo Somalia ka dhex fulinaaya howlgalo, waxa ayna tilmaantay in howlgalka ciidamada Mareykanka uu waxbadan ka bedeli doono dhaqdhaqaaqa Al-shabaab.
Afhayeenka ciidamada Uganda Richard Karemire ayaa talaabadaasi ku tilmaamay in ay tahay arin wanaagsan oo muujineyso talaabo horay uu u qaaday Maraykanka si buu yiri uu gacan uga gaysto howlgalka ka socdo dalka Somalia.
Richard Karemire, waxa uu sidoo kale sheegay in talaabada ay ciidamada Mareykanka uga howlgali doonaan Somalia ay dhiiro galin u noqon doonto dowlada Somalia iyo Ciidamada AMISOM ee dhowrka sano ku dhex jira howlgalada lagula dagaalamaayo Al-shabaab.
Richard Karemire, ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka Saraakiisha iyo Ciidamada Mareykanka uu waxbadan ka bedeli doono hanaanka ay ku shaqeeyaan ciidamada dowlada Somalia iyo AMISOM.
Dhinaca kale, haddalka Richard Karemire, ayaa kusoo beegmaaya xili dowlada Somalia ay ballanqaaday inay ku shaqeyneyso ciidamada AMISOM si amniga uu u gaaro magaalada Muqdisho